Sidoo kale waxaa jira qof aamusnaanta nafis u tahay oo laga yaabo inta badan uu hadlo ay u noqoto in badan uu xanuunsado.
Sidoo kale waxaa jira qof is dhahaya hadalka badan macna kuuma saaidinayo.
Ma ahan in aad naftaada u sheegto wax aan dhabta ku salaysnayn balse dareenkaaga nafsnimo uu jecelyahay.
Dhabta nolosha waa lama huraan in lagu noolaado wixii xun in ay xun yihiin u daa.
7-Hebel waa xun yahay!!
10-Khilaaf dhexdooda ahIs aqbalid la’aan
15-Umad la yaab leh!!
Waxaynu nahay umad kooda guul daraysta guul u raadisa, kooda guulaystana in uu guul daraysto ku dadaasha.
16-Qasaaro iyo dhibaato.
Laba sabab oo kaliya ayey ku dhacaan qasaarada iyo dhibaatooyinka.
1- in aad samaysaa wax aadan ka fakarin.
2 iyo in aad ka fakartaa wax aadan samaynayn.
Hadal sidiisaba kuma dhaawaco hadduusan ka iman qof qaali ku ah qalbigaada.
hadalada ka soo baxa qof noloshaada qayb ku leh ayaa mar walba ku dhaawici kara.
Mararka qaar in aan dhab u qirano dhabta laabteena way xanuun badantahay inaga oo u baqanayna sharafta ubadkeena iyo waalidkeena.
Is waydiintu waxay tahay sharaftaada iyo tooda tee baa muhiimsan?